Baaritaanno, talaal iyo daweyn - Krisinformation.se
TB12 Tester, vaccin och behandling So
Halkan waxaad ka heleysaa macluumaad urursan oo ku aaddan waxyaabaha khuseeya saami qaadidda, baaritaannada unugyada difaaca ee cudurka lidka ku ah, tallaal, dawo iyo daweynta covid-19.
Saami-qaadid iyo baaritaanno
Si kor loogu qaado raadraacidda cudurka, loona yareeyo faafitaanka waxay Hey’adda caafimaadka bulshadu ku boorrineysaa dhammaan dadka leh calaamadaha cudurka in ay iska baaraan infekshin markaas haya, waxa loogu yeero baaritaanka PCR-ka. Taasi xitaa wey khuseysaa dhallinyarada iyo carruurta ku jira da’da iskoolka ilaa iyo fasalka dugsiga xannaannada.
Waxaa jira laba nooc oo baaritaan looguna talogalay covid-19:
Baaritaanka PCR waxaa loo isticmaalaa in lagu eego haddii aad adigu qabto ama mar dhawayd lahayd caabub socday oo ah covid-19.
Baaritaanka seerolojiiga (baaritaanka unugyada difaaca) wuxuu taas badelkeeda muujiyaa haddii uu kugu soo dhacay covid-19 oo aad yeelatay unugyada difaaca ee ka hortaga faayraskan oo sidaas aad si buuxda ama qayb ahaan ku yeelatay difaaca ka hortaga covid-19.
Sidan ayaa loo sameeyaa baaritaanadan
Goboladu waxay mas’uul ka yihiin fulinta baaritaanka PCR xilliga caabuq markaas socda oo baaritaankan badanaaba waxaa qaada shaqaalaha caafimaadka. Mararka qaarkood adiga laf ahaantaada ayaa baaritaanka PCR iskaga qaadi kara guriga, waxa lagu magacaabo baaritaanka qofku keligii qaado. Laakiinse ma jiraan wax ah baaritaan seerolooji (baaritaanka unugyada difaaca) oo adigu aad guriga iskaga qaadi karto oo ay ku talinayso Hey’adda caafimaadka bulshada. La xiriir gobolkaaga si aad u hesho macluumaad dheeraad ah kuna saabsan qofka is baari kara meesha adigu aad ku nooshahay. Jihadu waa in dadka oo dhan loo soo bandhigo baaritaanka unugyada iska difaaca cudurkan oo lagu helo kharashka bukaan socodka ee caadiga ah.
Halkan waxaa ku jira isku xirayaasha baraha intarneetka ee goballada oo leh macluumaad ku aaddan covid-19 iyo bogagga Hagaha daryeelka caafimaadka1177 oo leh macluumaad ku aaddan sida aad covid-19 isaga baari kartid gobalkaaga. Bogaggu waa af-Iswiidhish.
Akhri dheeraad ku saabsan sida baaritaanku u dhaco kuna qoran 1177 Hagida Daryeelka.
Tallaal iyo dawo
Waqtiga iminka ah ma jiraan wax tallaallo ah ama dawo la oggolyahay oo ka dhan ah covid-19. Laacibiin fara badan oo caalamka ah ayaa siyaabo kala duduwan u shaqeynaya si ay tallaal u soo saaraan. Laakinse in tallaal la soo saaro waxay qaadaneysaa waqti dheer, mararka caadiga ah sanooyin fara badan. Xitaa haddii si xoog ah loo wado cilmi baaris ku aaddan covid-19, waxaa ay tahay in lagu xisaabtamo in aan inta lagu jiro 2020 la heleyn tallaal diyaar u ah in la adeegsado.
Hey’adda dawooyinku waxay iskaashi la leedahay hey’adaha kale ee dawooyinka ee Yurub iyo caalamka intiisa kale si looga fogaado in dawooyin kala duduwan wax lagu daweeyo, iyo si gacan looga geysto dadaalka loogu jiro in tallaal loo helo cudurka.
Hey’adda dawooyinka, ku saabsan tallaal ka dhan ah covid-19 (boggu waa af-Iswiidhish)
Digniin ku aaddan badeecooyin dadka luminaya
Hey’adda raashinku waxay dadweynaha ku boorrineysaa in ay iska jiraan dawooyinka nafaqada iyo raashinka kale ee la sheegto in ay reysinayaan ama ka hortagaan covid-19. Badeecooyin fara badan ayaa soo baxay gaar ahaan kuwa elekteroonig ahaan loo iibiyo, laakin in la sheegto in dawooyin nafaqo iyo raashin kale ay reysinayaan ama ilaaliyaan covid-19 waa sharci darro maxaa yeelay wax caddeyn cilmiyeed ah taas looma hayo. Hey’adda raashinku waxay la shaqeysaa hey’adaha kale ee dowladda si iibinta waxaas loo joojiyo.
Haddii aad aragtid badeecooyin noocaas ah waxaad ashtako u gudbin kartaa isbatoorayaasha raashinka ee degmada ama waxaad Hey’adda raashinka e-mail ugu diri kartaa registrator@slv.se.
Uppdaterades 3 jul 2020 09:07